Services – AMABHINCA
Esikwenzayo ukuthatha izindaba ezenzeka emculweni wesintu uMaskandi sikubekele zona endaweni ephephile. Sikholwa ukuthi akukho okungasusa indaba eqoshwe kwi-internet kuyidukise. Ukubeka izindaba ezindaweni ezikanjena kwenza ukuthi izizukulwane nezizukulwane ezisazozalwa zifike zifunde zazi ukuthi usibanibani wake watalabha usibanibani kwajika ilanga. Yingakho sithe asikubekele izindaba ezenzeka kule ndima ukuze ziyohlala zibe umlando
Uma kungathiwa kukhona umuntu othanda uMaskandi kodwa ongafisi ukwazi ukuthi kwenzakalani kuwona ngabe bamloyile. Vakashela leli khasi ngazikhathi zonke.
Abaningi abaculi bakholelwa ekuthenini ukudayisa amacwecwe kuphela akwanele. Kufuneka sengathi nabahleli bemcimbi bengabasiza bebaqashe ukuze bezothola.
Njengoba umculo usuthanda ukungena kubathandi bawo, kuyindlela engcono kakhulu ukuthi bawuthenge online ngoba ama-CD kuzohamba aphelelwe isikhathi.
Ukubona lo mculo ukhula uze ugcine ulinganiswa noma ugcine uhlonishwa nawo njengeminye imculo. Yingakho sithathe isinqumo sokuthi sigcine izinto ezenzeka ngaphakathi endimeni zikhona ukuze nezingane zezingane zethu ziyokwazi ngalo mculo.
Asicheme namculi futhi asikhethi bala lamculi ngoba nomlandeli siyabhala ngaye
Sifisa iphele lento yokuthengwa komculo emgwaqeni ngoba iyawubulala umculo wethu
Ukuze abaculi bafinyelele ezifisweni zabo badinga isupport kubalandeli nakwabemicimbi
Imalini Imfene. Lesi isihloko se-album yale nsizwa ekhombisa ikhono eliyisimanga nenkulu ingoma
Yimi Inkosi. Le nsizwa ikhiphe icwecwe yalinika sona kanye lesi sihloko kanti inkulu kakhulu nengoma
Ride or die. Lesi isihloko se-album yale nsizwa ephume ngoDecember 2020 enezingoma zothando
Two Idiots. Lesi isihloko se-album yale nsizwa ethandwe kakhulu abantu kanti yenze ezibukwayo italabha Ezebhova
Ziza kuwe zishisa mthandi wengoma
Sikubhekela ezishisayo nezihamba phambili kule ndima yomculo maqede sikusondezele zona ezinkundleni zokuxhumana. Okwakho ukulandela ilink ukuze uzozwa ukuthi sekwenzekeni endimeni yomculo ngoba liyabhulwa bo nehawu.